SHIR xasaasi ah oo dhex maray mucaaradka, Deni, Madoobe iyo Cabdi Xaashi - Caasimada Online
Home Warar SHIR xasaasi ah oo dhex maray mucaaradka, Deni, Madoobe iyo Cabdi Xaashi
SHIR xasaasi ah oo dhex maray mucaaradka, Deni, Madoobe iyo Cabdi Xaashi
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dhacay shir u dhaxeeyey xubnaha Midowga Musharaxiinta, Guddoomiyaha Aqalka Sarre, Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo ayagu ku wada mideysan Madasha Bad-baado Qaran.
Xogta ay helayso Caasimada Online ayaa sheegay in madaxdaan ka shireen muddo kordhintii uu shalay sameeyay Golaha Shacabka, midaasi oo ka hor-imaaneysa sharciga dalka iyo digniintii muddooyinkii dambe laga soo jeedinayay arrintaas.
Waxay shirkaan diirada lagu saaraya sidii mowqif mideysan looga soo saari lahaa muddo kororsiga dowladda. Kulankooda oo ahaa mid albaabada u xirnaa ayaa labada dhinac waxay ka soo saari doonaan go’aan siyaasadeed oo ay uga jawaabayaan tallaabadii shalay ee Baarlamaanka.
Dowladda federaalka ayaa dhawaan shaacisay inuu fashilmay shir maalmo uga socda madaxda sarre ee dowladda federaalka iyo kuwa maamulada dalka teendhada Afisyooni, kaasi oo ay dadaal badan ku bixisay beesha caalamka.